FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
UKUVUSWA kukaYesu akulobali nje elingenamsebenzi. Umpostile uPawulos wachaza ukubaluleka kwako xa wathi: “Noko ke, uKristu uvusiwe kwabafileyo, intlahlela kwabalele ekufeni. Ekubeni ukufa kungomntu, nokuvuka ekufeni kukwangomntu. Kuba kanye njengoko kuAdam bonke besifa, ngokunjalo nakuKristu bonke baya kwenziwa baphile.”—1 Korinte 15:20-22.
UYesu wavuswa ngoNisan 16, 33 C.E. Ngolo suku, amaYuda ayedla ngokunikela ngentlahlela yezivuno zawo kuYehova uThixo kwingcwele yetempile yaseYerusalem. Ngokubiza uYesu ngokuba yintlahlela, uPawulos wayebonisa ukuba kwakukho nabanye abantu ababeza kuvuswa.
Amazwi awathethwa nguPawulos emva koko acacisa oko kwafezwa kukuvuswa kukaYesu. UPawulos wathi: “Ekubeni ukufa kungomntu, nokuvuka ekufeni kukwangomntu.” Ekubeni uAdam wasosulela ngesono nokungafezeki, sonke siyafa. Noko ke, ngokunikela ngobomi bakhe obufezekileyo ukuze bube yintlawulelo, uYesu wasivulela indlela yokukhululwa kubukhoboka besono nokufa ngokuvuswa kwakhe. UPawulos wayishwankathela le nto ngala mazwi akweyabaseRoma 6:23: “Umvuzo isono esiwuhlawulayo kukufa, kodwa isipho uThixo asinikayo bubomi obungunaphakade ngoKristu Yesu iNkosi yethu.”
UYesu wayichaza indlela okusinceda ngayo ukufa nokuvuswa kwakhe. Ethetha ngaye, wathi: ‘UNyana womntu umele aphakanyiswe, ukuze wonk’ ubani okholwayo kuye abe nobomi obungunaphakade. Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade.’—Yohane 3:14-16.
Khawufan’ ucinge nje—ubomi obungunaphakade kungekho ntlungu nasizi! (ISityhilelo 21:3, 4) Sikulinde ngamehl’ abomvu ukuphila apho! Omnye umphengululi wathi: “Ndiyavuma, amangcwaba akukhumbuza ngendlela obubufutshane ngayo ubomi, kodwa uvuko lona lusisiqinisekiso sendlela okuza kuphela ngokukhawuleza ngayo ukufa.” Ngokucacileyo, ukuvuswa kukaYesu kusivulele ithuba lokuphila ngonaphakade!